Ọ bụghị ndị ọkachamara SEO niile ka e kere ha nhata | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 8, 2010 Tọzdee, Septemba 17, 2015 Douglas Karr
Mgbe m nọ Ngwakọta, M na-agakarị na SEO ọkachamara na-enwe mmasị ịma aka obere ihe niile gafee ngwa. Na esemokwu bụ na ejiri ndị folks a rụọ ọrụ na ọnụọgụ peeji ole na ole yana Keywords ole na ole wee mezie mmetụta nke ibe ndị ahọpụtara. Ejighi ha iji ikpo okwu ebe ha nwere ike ịlele ọtụtụ narị okwu ma dee ọtụtụ ọdịnaya dị oke mma iji rụpụta nsonaazụ.
Ọ bụghị ndị ọkachamara SEO niile ka ha kere. Aga m ekewaputa m dika SEO jaak niile ahịa. Ekelere m, gbara m ndị ọkachamara SEO ndị ọzọ gbara mbọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ nsogbu maka ndị ahịa. M na-amụta ihe n’aka ha mgbe niile.
Anaghị m akụ aka na ọkachamara SEO ọ bụla - mana enwere ụfọdụ nsogbu ndị ọtụtụ ndị ahịa na-eche ihu chọrọ ọkachamara ọfụma:
mpi - saịtị ndị a na-abụkarị nnukwu dollar saịtị ma na-etinye nnukwu ego n'ime ọdịnaya na ọrụ iji nyere aka ịkwagide backlinks siri ike na saịtị ahụ ma bulie ibe ọ bụla na usoro ọ bụla kachasị mma.
Obodo - ịmepụta saịtị gị maka SEO mpaghara chọrọ ụfọdụ usoro dị iche iche, na-etinye okwu mpaghara, na iwulite mpaghara, njikọ ndị dị mkpa. Ọdịnaya ga-abụ nke ezubere iche n'oge niile!
Gbasaa - iwulite ma na - eme ka saịtị gị kwalite maka ọtụtụ isiokwu, mgbe ụfọdụ puku kwuru puku, nwere ike were ụfọdụ ngalaba saịtị pụrụ iche iji bulie mmetụta nke ọdịnaya ahụ na saịtị ahụ.
Blọọgụ - blọọgụ bụ anụmanụ dị iche karịa karịa ịkwalite saịtị weebụ. Ejiri usoro iji bipụta ma gbasaa ọdịnaya, dee akwụkwọ na-adọrọ adọrọ iji dọrọ uche, ma jikọta igodo mgbasa ozi. Iwuli n'elu ikpo okwu nke na-ebunye ihe eji eme ihe dika ping, saịtị maapu, data meta, na ihe omuma kachasi nma bu ntoala ị gha etinye. Onweghi otutu peeji a adighi egbochi gi.
New - pushingkwanye ngalaba ọhụrụ na-enweghị ikike chọrọ atụmatụ dị iche iche karịa ịrụ ọrụ na saịtị nwerelarị ikike na ọkwa dị mma.
Micro-saịtị na ọdịda - iwulite saịtị nwere uche na ibe ma obu abuo iji dozie uzo di iche iche na ihe omuma choro ichota oke nkesa na ntinye akwukwo.
Akwa Odudu - ụfọdụ ndị ọkachamara SEO na-arụghị ọrụ na ngalaba ndị guzobere nwere nnukwu ogo were ihe egwu na-enweghị isi. Fọdụ ụmụ nwoke SEO dị ka tinker na tweak ruo mgbe ha mebiri ọrụ. Adịghị mma mgbe ị nwetara ndekọ ndekọ a pụrụ ịdabere na ya. Oge ụfọdụ ị na-acha tinking nwere ike were ọtụtụ ọnwa ịrịgoghachi.
Ozugbo - ọtụtụ ebe ntanetị na saịtị ndị a ma ama na-achọ ihe ọmụma banyere otu esi ewere isiokwu na-ewu ewu ma gbanwee ya n'ụgbọ okporo ụzọ n'ime nkeji ma ọ bụ awa iji SEO nke ọma. Guysmụ okorobịa a dị ịtụnanya… ọ na-atọ ụtọ mgbe niile ịhụ ndị na - ebute ọkwa # 1 mgbe akụkọ na - agbaji.
Ugbo - ọdịnaya ugbo na-amalite iwepụ dịka ohere na bandwit na-agbadata n'ụzọ dị egwu. Ọ bụrụ na m nwere ike ịmepụta saịtị dị mma nke na-agbakwunye isiokwu 500 kwa ụbọchị wee wepụta peeji ndị ahụ, enwere m ike itinye ụfọdụ mgbasa ozi na ha wee rite uru dị ukwuu. Karịsịa ma ọ bụrụ na m na-eleba anya na ibe na isiokwu ndị na-eme ka ọnụ ahịa ịpị ọnụ na ọnụ ọgụgụ ọchụchọ dị elu.
Ka ị na-azụ ahịa maka ọkachamara SEO ọzọ gị, kpachara anya maka ndị ahịa ha na ha rụkọrọ ọrụ, atụmatụ ha ga-etinye, yana ọkachasị nsonaazụ ha rụzuru. O yiri ka ụlọ ọrụ ọ bụla nọ ebe ahụ na-agbakwunye SEO na ndepụta nke ọrụ ha services kpachara anya.
Jụọ maka ntụaka, chọọ ndị ọkachamara na ntanetị iji hụ ma ha n'ezie n'usoro, ya ejula gi anya mgbe ntinye rituru na ala map nile. Nnukwu enyemaka SEO bara uru itinye ego na ego ma nwee ike ịme nnukwu ego. Ogbenye SEO bu ego efu.
Tags: ala ubiobodo seongalaba ọhụrụn'usoro site na isiokwuozugbonjikwa ikikeAseo asọmpiseo ọkachamarandị ọkachamara seo
E nwere oge mgbe "Jack of Trades niile" na ngalaba ya bụ ihe dị mma. Ọ dịghị mkpịsị aka na-atụ ihe mere na ọrụ gị anaghị arụ ọrụ n'ihi ihe onye ọzọ kwesịrị ime. M ka na-eche na ọ bụ na a na-akpọkarị m onye ọka iwu na adị m mma na nke a. Ha na-agbanwekarị echiche ha mgbe ha jiri ọrụ m ;-).
A na-ewere isi okwu gị nke ọma na enwere m olileanya na ndị nọ ebe ahụ na-achọ SEO "ndị ọkachamara", dị ka ọkachamara ọ bụla ọzọ ị na-achọ, ghọta isi ihe ị kwuru n'elu iji nwee ike ikwenye ma gosipụta ogo nke "ọkachamara" ha chọrọ ma ọ bụ chọrọ.
Ezi afọ ọhụrụ ma debe nnukwu ọdịnaya na-abịa! M ụtọ gị mgbaàmà ka mkpọtụ ruru 😉